Haallii Dhaddacha Keessaa Abukaatotaaf Iyyu Sodaachisaa Ta’a Jira. Obbo Abdul Jabbaar Huseen
Guraandhalaa 05, 2018
Bellama darbee irratti dubbatanii dhaddacha jeeqxan jedhamuun mata mataatti hidhaa baatii ja’an kan adabaman hoogganoonni kongresii Federaalawaa oromoo arfan har’a immoo ni calliftan jedhamuun adabii ka biraa kan baatii ja’aa dabalataan dhaddachi irratti muree jira.
Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Addisuu Bullaallaa maqaan keessan yeroo waamamuu owwaachuu akkasumas dhaabachuu diduun hojii mana murtii daqiiqaa soddomaaf lafa irra harkiftan jechuun adabii kun kennamuu abukaatoo kan ta’an Obbo Abdujabbaar Husseen ibsanii jiru.
Hidhamtoonni garu yeroo maqaan isaanii waamamu harka ol baasuu ibsanii akkasuma abukaatoon jarreen arfanii dhaabatanii waan jiraniif jecha hagas adaba akkasii kan kennisiisu hin turre jedhan.
Keessumaa inni har’a kun murtii isa dhumaa dhaggeefachuuf waan ta’eef yeroo itti abukaatoon iyyu ta’aa itti jedhaman akka ture muxannoo qaban irraa Obbo Abdul Jabbaar ibsanii jiru.
Ituu himatamaa haaraatu yeroo duraaf dhaddachatti dhiyaata ta’e adda baafachuuf jecha akka dhaabatu akkasumas eenyuummaa isaa akka mirkaneessu gochuun barbaachisaa ta’u ibsanii waluumaa gala deemsa dhaddachaa falmuuf abukaatoon yeroo dubbatu haallii sodaachisaan uumamaa akka jiru ibsamee jira.
Kunis dubbachuuf carraa dhorkamuu daddabalee taa’ii ajajii jedhu akka kennamuu abukaatoleen haasoofsiifne lameen dubbatanii jiran.Silaa Manni murtii “ Kabajamuu malee Sodaatamuu hin malle” jedhu.
Galmee wal fakkaataa irratti kan har’a murtii dhumaaf dhiyaachuun irra ture himatamtoonni biroon Obbo Geetuu Girmaa, Obnbo Bayyanaa Ruudaa, Obbo Tasfaayee Liiban fi Obbo Darajjee Margaa manni hidhaa yeroo lammataaf hin dhiyeessina hafuu isaa abukaatoo kan ta’an Obbo Wandimmuu Ibsaa ibsanii jiru.
Isaan arfan keessaa ragaa ittisaa kan dhiyeessanii hin xumurree ituu jiranii dhaddachi murtii dhumaa kennuuf bellama qabee jedhu.Himatamtoota saddeettan irratti murtii dhumaa kennuuf bellamnii Ji’a tokkoo qabamee jira.
Gaaffii fi deebii gaggeeffame caqasaa.
Hogganoota KFO Hidhaa Dabalataa Kan Baatii Ja’an Adabaman: Abukaatoo